सावधान ! फेसबुकमार्फत ठगिनुहोला। - Malayakhabar
होम पेज फिचर सावधान ! फेसबुकमार्फत ठगिनुहोला।
सावधान ! फेसबुकमार्फत ठगिनुहोला।
बागलुङ:= गत असोज ६ गते मध्याह्नपख ढोरपाटन नगरपालिका–६ की मीना बुढामगर र ‘डोनल्ड किन्ले’ नामको फेसबुक प्रयोगकर्ताबीच म्यासेन्जरमा कुराकानी हुन्छ । ती व्यक्तिले बुढामगरलाई केही सामान पठाएको बताउँछन् । लगत्तै उनले अपरिचित नम्बरबाट फोन गर्छन् र बुढामगरलाई भन्छन्, “मैले जेजे भन्छु, त्यही ‘रिप्लाई’ दिनु ।”
सङ्गठित ठगीको कसुर प्रमाणित भएमा न्यूनतम पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीका घटना बढेको भन्दै प्रउ श्रेष्ठले आम नागरिक सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता कुनै शङ्कास्पद घटना भएमा तुरुन्त प्रहरीकहाँ आउन सुझाव दिनुभयो । रासस
अघिल्लो लेख नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा शुरु।
पछिल्लो लेख भागरथी हत्या प्रकरण: हत्याका अभियुक्त दिनेश भट्ट सार्वजनिक